Adria Airways ee dalka Slovenia waxay joojineysaa dhammaan duulimaadyadii: Maxaa xigi doona?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Adria Airways ee dalka Slovenia waxay joojineysaa dhammaan duulimaadyadii: Maxaa xigi doona?
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Wararka Slovenia • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Shirkadda Adria Airways ayaa la socota Thomas Cook oo joojisay dhammaan duulimaadyadii maanta. Condor Jarmal ayaa laga yaabaa inay ku xigto
Shirkada Adria Airways ee fadhigeedu yahay dalka Slovenia ayaa sheegtay inay joojineyso dhamaan duulimaadyada maalmaha Talaadada iyo Arbacada sababo la xiriira “helitaanka lacag la’aan cusub oo lacag la’aan ah taas oo ay shirkaddu u baahan tahay howlo duulimaad oo dheeri ah”.
Xarunta dhexe ee shirkada Adria waxay ku taalaa garoonka diyaaradaha Ljubljana ee kuyaala Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenjskem, Slovenia, oo udhow Ljubljana.
“Shirkaddu waxay xilligan si xawli ah u raadineysaa xalka iyada oo la kaashaneysa maalgaliye suurtagal ah. Ujeedada qof kasta oo ku lug leh ayaa ah in Adria Airways ay mar kale duusho, ”ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay goor dambe oo Isniintii ah.
Slovenia waxay Adria ka iibisay sanduuqa maalgashiga Jarmalka ee 4K Invest sanadkii 2016. Tan iyo markaas shirkadu waxay iibisay dhamaan diyaaradihi iyada oo isticmaaleysay diyaarado kiro ah si ay ugu duulaan dhowr meelood oo yurub ah.
Bishii Maarso 2016, 4K Invest, oo ah sanduuq dib-u-habeyn ku saleysan Luxembourg, ayaa helay boqolkiiba 96% saamiyada shirkadda 'Adria Airways' ee gobolka Slovene. Milkiilaha cusub wuxuu magacaabay Arno Schuster inuu noqdo agaasimaha guud ee shirkadda Adria.
1-dii Julaay 2017, Adria waxay hakisay saldhigeedii magaalada Polish ee Łódź, halkaas oo ay ka duullimaadyo kula jirtay diyaaradeedii CRJ700 ee saldhiggeedu ahaa, ee ka diiwaangashan S5-AAZ, saddexdii sano ee la soo dhaafay. Inta lagu jiro waqtigan, Adria waxay sidoo kale ka furtay laba saldhig oo kale Poland, mid ku yaal Rzeszów iyo mid ku yaal Olsztyn; si kastaba ha noqotee, labadaba si dhakhso leh ayaa loo joojiyay. Adria ayaa hada lagu wadaa inay diirada saarto xarunteeda ugu weyn garoonka diyaaradaha ee Ljubljana, taasoo horeyba u aragtay inay kordhayaan duulimaadyada ay ku tagayaan dhowr meelood oo ay tagto Adria. Meelaha ay tagayaan waxaa ka mid ah Amsterdam, Podgorica, Pristina, Sarajevo iyo Skopje.
20 Luulyo 2017, Adria waxay ku dhawaaqday inay soo iibsatay Darwin Airline, oo duulimaad ku tagta Etihad Regional oo ay iska lahayd Etihad Airways. Diyaaraddu waxay isu suuqgeyn doontaa sida Adria Airways Switzerland, laakiin waxay sii wadi doontaa howlaheeda sidii Darwin Airline oo ay la socoto shahaadada shirkadda duulimaadka ee hadda jirta (AOC). Adria waxay mas'uul ka noqon doontaa suuqgeynta iyo qaar ka mid ah howlaha maamulka iyo howlaha. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda, tani saameyn toos ah kuma yeelan doonto howlaha duulimaadka guud ahaan, maadaama labada saldhigba ay sii joogi doonaan Geneva iyo Lugano.
Bishii Sebtember 2017, waxaa la ogaaday in Adria ay iibisay sumadeedii oo ahayd 8 milyan oo Yuuro iibsi aan la shaacin bishii Diseembar ee sanadkii hore.
Bishii Nofeembar 2017, Adria waxay ku dhawaaqday duulimaadyo cusub oo ka imanaya magaalada Bern ee Switzerland, taas oo ku timid SkyWork Airlines, oo hore u ahayd shirkadda ugu weyn ee ka hawl gasha garoonka Belp, oo lumisay AOC. Duulimaadyada aadaya Berlin, Hamburg, Munich iyo Vienna ayaa lagu waday inay bilowdaan Nofeembar 6, 2017, waxaana waday shirkadda hoosaadkeedu yahay Adria Airways Switzerland, hase yeeshe, qorshayaashan ayaa la joojiyay maalmo uun ka dib markii lagu dhawaaqay, iyadoo SkyWork ay ku guuleysatay inay dib u hesho AOC.
Sanadihii ugu dambeeyay, Adria waxay diirada saartay duulimaadyada hoc, kuwaas oo inta badan u shaqeeya shirkadaha waaweyn ee baabuurta, sida Ford, Chrysler iyo Ferrari.
12kii Diseembar 2017, shirkadda Adria ee Switzerland ee darwin Airline, oo u shaqaysay sidii Adria Airways Switzerland, waxaa lagu dhawaaqay inuu musalafay oo AOC lagala noqday. Diyaaraddu waxay joojisay dhammaan shaqooyinkii.
Bishii Janaayo 2019, Adria Airways waxay ku dhawaaqday inay xireyso howlaheeda mudada gaaban ee diiradda saarnaa garoonka diyaaradaha Paderborn Lippstadt ee Jarmalka kaasoo ka koobnaa seddex waddo oo loo maro London (taasoo horey u joogsatay dabayaaqadii 2018), Vienna iyo Zürich. Isla waqtigaas, goosgoosyada waaweyn ee khadkeeda khadka ka duula saldhigga shirkadda ee magaalada Ljubljana ayaa lagu daabacay dhammaan adeegyada Bra to, Bucharest, Dubrovnik, Düsseldorf, Geneva, Hamburg, Kiev, Moscow iyo Warsaw.
Vietnam ayaa dib u furtay jasiiradda Phu Quoc si si buuxda loo tallaalo...
Boeing 777X waxay timid Dubai 2021 Dubia Airshow
Swoop wuxuu bilaabay duulimaadyo cusub Palm Springs oo ka yimid...